Ngaba iwebhusayithi yakho iyathetha njengeAmazon?
NgoLwesihlanu, Matshi 10, 2017 NgoMvulo, Matshi 13, 2017 U-Muhammad Yasin
Wagqibela nini ama-Amazon ukukubuza ukuba ungubani? Mhlawumbi xa ubhalisela iakhawunti yakho yeAmazon okokuqala, akunjalo? Kwakukudala kangakanani oko? Yile nto ndiyicingileyo!
Ngokukhawuleza xa usayina kwiakhawunti yakho yeAmazon (okanye undwendwele indawo yabo kuphela ukuba ungene ngemvume), ikubulisa kwangoko kwikona yasekunene. Ayikubulisi iAmazon kuphela, kodwa ikubonisa kwangoko izinto ezifanelekileyo: iingcebiso ngemveliso esekwe kwiminqweno yakho, imbali yokukhangela, kunye noluhlu lwakho lweminqweno. Kukho isizathu sokuba iAmazon ibe yindawo yamandla eCommerce. Ithetha nawe njengomntu, kwaye UNGAYITHANDI njengewebhusayithi… kwaye zizinto ezininzi ezinokuthi zidityaniswe kwiiwebhusayithi zazo.
Kwimeko apho ungakhange uqaphele, iiwebhusayithi ezininzi zinememori yexesha elifutshane kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba utyelela kangaphi iwebhusayithi ethile, unokufumana ungenisa ulwazi lwakho rhoqo. Nokuba ukhuphele i-eGuide evela kumbutho (emva kokugcwalisa ulwazi lwakho), kwaye ufumana i-imeyile ekumemela ukuba ukhuphele i-eGuide elandelayo, ngokuqinisekileyo uzifumana kufuneka uphinde ugcwalise ulwazi lwakho. Kuphela… kunzima. Yinto efanayo nokucela ubabalo kumhlobo wakho uze uthi kubo “ungubani kwakhona?” Iindwendwe kwiWebhusayithi ngokucacileyo azithuki ngokwenyani- kodwa uninzi luyaphazamiseka.
Njengabantu abaninzi, ndilungile ekukhumbuleni ubuso, kodwa koyikeka ukukhumbula amagama-ke ndenza umzamo odibeneyo wokubakhumbula kwikamva. Ukuba ndifumanise ukuba ndilibale igama labo, ndiza kuyibhala phantsi kwifowuni yam. Ndikwenza konke okusemandleni am ukubhala phantsi ulwazi olongezelelweyo kunxibelelwano lwam njengokutya okuthandayo, imihla yokuzalwa, amagama abantwana, njlnjl- nantoni na ebalulekileyo kubo. Kuyandithintela ekubeni ndibabuze ndiphindaphinde (nto leyo ekrwada) kwaye ekugqibeleni, abantu bayawuxabisa umzamo. Ukuba kukho into enentsingiselo komnye umntu, ndifuna ukuqinisekisa ukuba ndiyayikhumbula. Iiwebhusayithi zakho kufuneka zenze ngokufanayo.
Ngoku, masinyaniseke kwiziqu zethu-nokuba ubhala yonke into phantsi, awuyi kuzikhumbula zonke iinkcukacha ezibalulekileyo. Nangona kunjalo, ume elona thuba likhulu lokukhumbula ezinye iinkcukacha ukuba uzama. Iiwebhusayithi kufuneka zenze ngokufanayo- ngakumbi ukuba bafuna ukuzibandakanya ngcono nabathengi, bafumane ukuthembela kwabo kwaye babone ukuthengiselana okungaphezulu.
Nangona ingowona mzekelo ucace gca, iAmazon ayisiyiyo kuphela iwebhusayithi ebonakalisa phambili isazela. Kukho imibutho emininzi echonge ukuba kubaluleke kangakanani Yenza amava abo kwi-Intanethi abandakanyeke ngakumbi kwaye abe nolwazelelelo. Nazi ezimbalwa endinokuzirhabaxa ngokulula:
Apha kwi-PERQ, saqala ukusebenzisa BuzaNice Inkqubo eqokelela ingxelo enokwenzeka nge Amaphuzu okuPhucula iNtengiso nge-imeyile. Ngeenjongo zethu, sifuna ukufumana ukuqonda okungcono malunga nokuba abathengi bacinga ngokunyanisekileyo malunga nemveliso yethu. Isaveyi enamacandelo amabini elula ithunyelwa kuye ngamnye wabathengi bethu. Inxalenye ye-2 icela umthengi ukuba alinganise amathuba abo okusithumela kwisikali ukusuka kwi-1-1. Inxalenye yesi-10 ivumela ingxelo evulekileyo- ukubuza ukuba kutheni loo mthengi ekhethe olo nqanaba, singenza njani ngcono, okanye bangacebisa bani. Babetha bangenisa, yiyo ke loo nto! Akukho ndawo yokugcwalisa igama labo, idilesi ye-imeyile, okanye nantoni na enjalo. Ngoba? Ngenxa yokuba SIBAThumelele i-imeyile kwaye kufuneka ukuba sele sazi ukuba bangobani!
Ngaba unganyuka uye kumthengi weenyanga ezi-6 +, oye wakhulisa ubudlelwane obukhulu naye, kwaye ubuze ukuba ngoobani? Hayi! Nangona oku kunganxibelelani ubuso ngobuso, akukho ngqiqweni ukubabuza ngolwazi osele unalo. Njengomntu obefumene ezi imeyile, ndiyakuxelela ukuba xa kufuneka ndibabonelele ngolwazi lwam KWAKHONA, kuvakala ngathi ndiyathengiswa ku… kwaye ukhathalele, sele ndiyithengile imveliso yakho. . Ungandibuzi ukuba ndingubani xa sele undazi.
Ke, ukubuyela kwi-AskNicely-umthengi ucofa kwi-imeyile, ukhethe inani phakathi kwe-1-10 kwaye emva koko unike ingxelo eyongezelelweyo. Olu lwazi ke luthunyelwa kumbutho oqhuba olo phononongo, apho banokuthi babonelele ngcono iimfuno zomthengi lowo kwixesha elizayo. Amanqaku abo afakwa kwangoko kwiprofayili yomthengi.
Zama ukulingwa kwasimahla kokuBuza
Ukuba ungumthengisi, okanye ungumnini weshishini le-eCommerce, amathuba mahle kakhulu ukuba uyazi ukuba ngubaniIFomstack ngu. Ukuba awazi,IFomstack liqonga elivumela amashishini ukuba ayile iifom zawo ezikwi-intanethi kwaye alawule idatha eqokelelweyo. Leyo yimigaqo ye-layman, ubuncinci. Iqonga linzima kakhulu kunoko (njenge-AskNicely is), kodwa ndiza kudlula kwezinye zeempawu ezizenza zibe sisixhobo esikhulu sokuzibandakanya.
Ixesha elidlulele,IFomstack wenze umzamo wokudibanisa itekhnoloji evumela ukuba iifom ezimileyo zingacaci. Ngokudibanisa nezinto ezibonakalayo zokwenza iqonga, amashishini anokukwazi ukwenza ngendlela iifom eziboniswe ngayo kubasebenzisi. Umzekelo: kuxhomekeke kwindlela umsebenzisi ayigcwalise ngayo ifom yangaphambili (okanye icandelo langaphambili lefom),IFomstack inokuphakamisa "ukuFomatha ngokuNemiqathango" ukubonisa imibuzo eyenza ezona mvakalelo zomphenduli. Ngapha koko, eminye imibuzo ingatsiba iyonke. "UkuFomatha ngokuNemiqathango" kusetyenziselwa ukunceda ukulungelelanisa inkqubo yokugcwalisa ifom kunye nokunyusa izinga lokugqitywa. Kulungile, kulungile?
Ngoku, ukuya kuthi ga kuthethathethwano nabaxumi bangoku,IFomstack Unokhetho lokuphumeza "iiFom zangaphambi kokuHanjiswa kwaBantu." Njengoko besenditshilo ngaphambili, kunzima kakhulu ukubuza abantu onobudlelwane ukuba bangobani. Kuyamangalisa. Kwaye nokuba awucingi ukuba "ayiqhelekanga," iindwendwe zewebhusayithi azikuthandi ukugcwalisa lonke ulwazi lwabo lokunxibelelana kaninzi. Kubantu esele bezibandakanya neshishini lakho, ungayenza ukuba ulwazi lokunxibelelana nomthengi lukhutshelwe ngokusuka kwifom enye ukuya kwenye. Ayifani kwaphela nokungabinayo ifom ebonisiweyo konke konke, kodwa ngokuqinisekileyo sisiqalo esihle.
Olunye ukhetho kukuthumela iifom ezizodwa ze-URL echaza ukuba ifom iye kumsebenzisi othile okanye kumthengi. Ezi URL zihlala zifumaneka kwii-imeyile “Enkosi” kwaye zihlala zikhokelela kuphando lokuLandela. Endaweni yendawo yokufaka igama, i-imeyile okanye inombolo yefowuni, iyaxhumela kumbuzo wokuqala. Akukho zingeniso-kunxibelelwano olunentsingiselo.
Ngelixa ndingenguye ngokobuqu Xbox umsebenzisi, ndiyazi abantu abaninzi abakhoyo. Elinye lamalungu eqela lam, uFelicia (Ingcali yesiqulatho se-PERQ), ungumsebenzisi oqhelekileyo. Ngaphandle kokhetho olubanzi kwimidlalo, uFelicia uyayithanda imbonakalo yomsebenzisi weXbox One yangoku- ethi ibandakanyeke kakhulu kwaye ibe yeyakho.
Xa usebenzisa i-Xbox (okanye i-PlayStation, ngalo nto, kulisiko ukwenza iprofayili yomdlali-zombini ngenjongo yokwahlula abasebenzisi abohlukeneyo kunye nokudlala kwi-Intanethi. Yintoni emnandi malunga neeprofayili zomdlalo weqonga kukuba i-Xbox interface ikuphatha njengomntu. Nje ukuba ungene, ubuliswa ngokoqobo ngu "Molo, Felicia!" okanye "Molo, Muhammad!" Kwiskrini (kwaye iya kukuxelela "Usale kakuhle!" xa ushiya). Ithetha nawe ngokungathi iyakwazi ngokwenyani- kwaye ngokunyanisekileyo, injalo
Iprofayile yakho yomsebenzisi weXbox inedashboard eyahlukileyo nazo zonke iiapps zakho, onke amanqaku akho emidlalo kunye noluhlu lwabo bonke abahlobo bakho bangoku. Eyona nto ipholileyo ngeli qonga kukuba, kunye nokukubonisa yonke into eyenza amava abe ngawodwa kwaye abe mnandi, isoftware izama ukwenza amava nokuba ENGCONO.
Inye into uFelicia ayifumene inomdla yayikukuba wayefumana iingcebiso zomdlalo kunye neapp, HAYI kangako ngokubhekisele ekusebenziseni kwakhe, kodwa ngokusekwe kwizihlobo zakhe ezazisebenzisa ngoku. Kuba kukho umbono woluntu ekujikelezeni uninzi lweekhonsoli zomdlalo wevidiyo, kwaye uninzi lwabasebenzisi banomdla ofanayo, kusengqiqweni ukwenza isebe ngaphandle kwaye ubonise abasebenzisi into entsha. Ukuba uFelicia ubona ukuba isahlulo esihle kubahlobo bakhe badlala "iiHalo Wars 2," umzekelo, unokufuna ukuthenga umdlalo ukuze adlale nabo. Unokucofa kumfanekiso womdlalo, kwaye usebenzise ikhadi eligcinwe kwiprofayili yakhe ukuthenga umdlalo, ukukhuphela kwaye uqale ukudlala.
Sifikile, inde indlela ende ukusukela ngeentsuku zokuphindaphindeka kwefom, kodwa kusenendlela ende ekusafuneka sihambe. Asekho amashishini amaninzi phaya anesiqhelo “sokuthatha imali abaleke.” Bafumana ulwazi, izibalo kunye neshishini abalidingayo ukuze bakwazi ukuzixhasa- kodwa abazami ngandlela zonke ukugcina abo bathengi. Ukuba ndifunde nantoni na kule minyaka imbalwa idlulileyo ukusuka ekusebenzeni kwi-PERQ, kukuba abathengi baziva bekhululekile xa amashishini ekhulisa ubudlelwane kunye nawo. Abathengi bafuna ukuziva bamkelekile- kodwa okubaluleke ngakumbi, bafuna ukuqondwa. Okukhona sibaqonda abathengi bethu ukuya phambili, kokukhona baya kutyekela ekuqhubekeni besenza ushishino nathi.
tags: Amazonzibuzefeliciaindlela yobumeI-PERQisikhululo sokudlalaXbox
Awardzee: Uwafumana njani amaBhaso akwi-Intanethi